Andriamifidisoa Zo · Janoary 2016 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Janoary, 2016
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Janoary, 2016
Mametraka An-tSarintany Ny Fahafatesan'Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Ao Ethiopia
Etiopia11 Janoary 2016
Raha milaza aminao ny governemanta ethiopiana fa dimy ihany ny mpanao fihetsiketsehana maty tamin'ny fisian'ny herisetra teo dia aza inoana izany.
Ekipam-Pirenen'i Afghanistan Amin'ny Football Reharehan'ny Firenena Na Dia Ao Anaty Faharesena Aza
Azia Afovoany sy Kaokazy06 Janoary 2016
"Filoha Afghan teo aloha Karzai H nijery ny lalao Amboara Suzuki SAFF tao an-tranony nipetraka tamin'ny karipetra sy dite maitso."
Manampy an'i Brezila Hanangana Ny Fahatsiarovana Varotra Andevo Ny Tanora Amerikanina Iray Mpanao Maritanàna
Amerika Avaratra05 Janoary 2016
Nopongarina vao haingana indray ny sisim-piantsonana nidiran'ny andevo tao Rio ary notendrena i Sara Zewde hanoritsoritra tsangambato amin'ny manodidina ity toerana nitrangan-javatra mampalahelo ity.
Te-hamelona indray ny fombafomban'ny vazimba teratany ao Meksika ny Voces Étnicas
Meksika04 Janoary 2016
Te-hametraka ny tenany ho fitaovana fampitana ny fombafomba sy ny nentin-drazana teratany ao Meksika ny Voces Étnicas, mba hahafahana maka sy mamelona indray ny ribany.
Eoropa Afovoany & Atsinanana02 Janoary 2016
Ilay sary nalaza haingana voatonona dia ny sarimihetsika mampihomehy sovietika Ny Tanan-Diamondra nivoaka tamin'ny 1969. Nanaisotra ilay aloalo ve ny fahitalavitra rosiana hitandroana tsy handratrana ny fihetseham-po kristiana?
Politisianina nanasa mpakasary handrakitra azy hividy fiara. Azo sary ihany koa ny famantaranandrony lafovidy noho ilay fiara hovidiany
Raha niaraka tamin'ny ekipa mpiara-miasan'ny televiziona anankiray ny mpanolotsainan'ny tanàna ao St. Petersburg antsoina hoe Vitaly Milonov haka azy an-dahatsary mividy fiara vita rosiana iray, dia tsy nihevitra izy fa ny famataranandrony an-tanana indray no ho lasa resaka. Ary dia izay indrindra anefa no nitranga.